Đang Đọc: [Review] Top 5 Ghế tập ngồi cho bé an toàn tốt nhất hiện nay | Muasalebang in Muasalebang
Ikhaya » Umama nengane » [Review] Izihlalo ezi-5 ezingcono kakhulu zezingane eziphephile namuhla
Ulayini wezihlalo zezingane usatshalaliswa kabanzi emakethe namuhla ukusetshenziswa okuyinhloko kuwukusiza izingane zibe nesimo sokuhlala esizinzile. Nokho, yiluphi uhlobo oluphephile futhi okufanele luthenge kumkhiqizo wekhwalithi engcono kakhulu? Lokhu kukhathazeka kuzophendulwa yithi ngesihloko ngaphambi kokuthi unqume ukuthenga baby exercise chair noma cha.
1 Ingabe isihlalo somntwana siyilungele ingane?
2 Imibandela yokukhetha isihlalo esingcono kakhulu sokuqeqesha ingane
2.1 Izinto ezinobungane
2.2 Muhle, umumo ohlekisayo
2.3 Idizayini ehlakaniphile
3 Ingabe kufanele uthengele izingane isihlalo esihle somntwana?
3.1 Uphawu lwasehlobo oludumile oluvela eMelika
3.2 U-Richell – umkhiqizo wezingane waseJapan
3.3 I-Hinata – umugqa womkhiqizo ofanele zonke izingane zase-Asia
3.4 I-Huggies – ibhrendi ehlonishwa kakhulu e-US
4 Izihlalo zezingane ezi-5 ezihamba phambili neziphephe kunazo zonke
4.1 1. Usihlalo wengane kaRichell – RC98010
4.2 2. Isihlalo sokuzivocavoca ingane Ehlobo
4.3 3. Huggies baby chair
4.4 4. Bonbebe baby chair
4.5 5. Intex baby chair
Ingabe isihlalo somntwana siyilungele ingane?
Lona umugqa wezihlalo zokunakekelwa kwezempilo zezingane ezincane ezinomklamo okhethekile ohloselwe ukusekela izingane ezibuthakathaka esiteji sokuhlala. Lokhu kusiza ukuqinisekisa ukuma okulungile, ukuzijwayeza ukuhlala kwesayensi nokuphepha okuphezulu kwengane.
Isiteji sokuhlala sibhekwa njengesikhathi esibalulekile sokwakha isisekelo sokukhula kwengane. Uma isimo sokuhlala singalungile, kulula ukuthinta uhlelo lwamathambo. Ngakho-ke, ukukhetha ukusebenzisa lo mkhiqizo wokusekela kuzosiza omama bazizwe belondeke kakhulu. Ngoba ezigabeni zokuqala zokuphila, izingane azikwazi ukuhlala ziqinile, ziwe kalula noma zihlale endaweni engafanele.
Ngakho-ke, isihlalo somntwana sikhiqizwa ukusiza ukusekela umzimba kanye nokumisa ukuma okuhle kakhulu. Ngaphandle kwalokho, isihlalo siklanywe ngobuhlakani, sidala ukuphepha nokunethezeka.
Ikakhulukazi lapho umntwana ehlezi esihlalweni, umama angahlala ngakolunye uhlangothi ukuze adlale naye, esiza ekukhuliseni amakhono omntwana okuqonda nokukhuluma. Ngakho-ke, ukuvumela ingane yakho ukuthi iyisebenzise kuyadingeka. Ngemva kwesikhathi esithile, lapho umntwana engakwazi ukuhlala eqinile futhi engasawudingi lo mkhiqizo, umama uvumela ingane ukuba ihlale yodwa.
Imibandela yokukhetha isihlalo esingcono kakhulu sokuqeqesha ingane
Isihlalo sokuqeqesha umntwana iwumkhiqizo wokusekela owusizo, kodwa ukukhetha isitulo esingcono kakhulu, ungasebenzisa ezinye zalezi zindlela ezilandelayo:
Isikhumba sezingane sisazwela kakhulu futhi sicasuka kalula, ngakho-ke lapho ukhetha ukuthenga isihlalo somntwana, kufanele ukhethe izinto eziphephile nezinobungane njengendwangu, umoya noma ipulasitiki. Izihlalo zokuzivocavoca kufanele zibe lula futhi zilungele ukunyakaza. Ezihlalweni zepulasitiki, omama badinga ukunaka amakhona adinga ukuba yindilinga futhi angabi bukhali ukuze agweme ukulimala lapho umntwana eshayisana ngengozi.
Muhle, umumo ohlekisayo
Emehlweni ezingane, izinto ezinhle nezinemibala kulula ukuheha ukunaka. Ngakho-ke, ukusebenzisa izihlalo zezingane ezinezimo ezihlekisayo nezihehayo kuzosiza izingane zijabulele futhi zifune ukuhlala esihlalweni ngaphezulu.
Lapho bethenga isihlalo somntwana, abazali kufanele bakhethe imikhiqizo ehambisana nomzimba neminyaka yengane yabo. Isihlalo kumele siklanywe ngendlela yokuthi sibambe umzimba wengane ngokugcwele kodwa siqinisekise ukuthi kungena umoya lapho ihlezi isikhathi eside, ikakhulukazi izinqe.
Ngaphezu kwalokho, i-backrest ethambile isiza ukuvikela uhlaka lomgogodla kanye ne-legroom ekhululekile. Ngakolunye uhlangothi, indawo yokuhlala kufanele futhi ishone futhi ibe ne-handrail eqinile ukuze kuqinisekiswe ukuthi ingane iphephe kangakanani.
Ingabe kufanele uthengele izingane isihlalo esihle somntwana?
Uma unentshisekelo baby exercise chair Iyiphi inkampani ehamba phambili, ungabheka amagama angezansi:
Uphawu lwasehlobo oludumile oluvela eMelika
I-Summer Infant iwumkhiqizo owaziwa kakhulu ovela e-US kusukela ngo-1985, lapho uWilliam Lockett III efuna ukutholela indodakazi yakhe indawo ephephile ngenkathi engakwazi ukwenza kanjalo. Kusuka kuleso sifiso ukuthi imigqa yezitulo ezinyakazayo yazalwa inkampani ye-Summer Infant. Ngo-2001, uJason Macari – iphayona emkhakheni wokudala imikhiqizo eyingqayizivele wanquma ukuthenga lolu hlobo.
Ngesipiliyoni seminyaka kanye nothando lomsebenzi wakhe, walethela i-Summer Infant umbono omusha. Imikhiqizo Yezinsana Zasehlobo yenza ukunakekelwa kwezingane kube lula, kube lula kunangaphambili, futhi kukhululeke ukucindezeleka okusebenzayo kubazali. Ngakho-ke, lokhu kungenye yemikhiqizo yekhwalithi uma ungazi ukuthi yiluphi uhlobo lwesihlalo somntwana oluhle.
U-Richell – umkhiqizo wezingane waseJapan
Wazalwa ngo-1966, umkhiqizo waseJapane u-Richell uvele emazweni amaningi emhlabeni jikelele ngemikhiqizo eminingi ephezulu nephephile. U-Richell unendawo yokukhiqiza kanye nesikhungo socwaningo esitholakala eChina.
Imikhiqizo ye-Richell ithuthukiswa isikhathi eside ngemiklamo ehlukahlukene. Ngezinto zekhwalithi ephezulu, eziphephile ngokusekelwe kubuchwepheshe bokukhiqiza obuphambili kakhulu banamuhla. U-Richell ungumnikazi womklamo okhangayo, nonobungane onamagajethi amaningi ahlakaniphile ukusiza ukusekela ngempumelelo inqubo yokuthuthuka eminyakeni yokuqala yokuphila kwengane.
Njengamanje, u-Richell unikezela emakethe imigqa yemikhiqizo emi-5 eqondiswe ngqo izingane ezinjengokunakekelwa kwezempilo, izitsha zokudlela, amathoyizi – izinsini zokuhlafuna noma izinto zokuphepha namaphampu amabele. Ikakhulukazi, usihlalo wengane kaRichell uya ngokuya ethola ukwethenjwa omama baseVietnam.
I-Hinata – umugqa womkhiqizo ofanele zonke izingane zase-Asia
Ukuhlale kuphelezela abazali uma bekhathazekile ngempilo nokukhula kwezingane kube yisiqubulo se-Hinata Co., Ltd selokhu yasungulwa. Imigqa yomkhiqizo ka-Hinata ikhiqizwa emigqeni yesimanje yezobuchwepheshe, ngaphansi kokugadwa okuqinile okuvela kochwepheshe bemboni. Ngenxa yalokho, iletha ukuthula kwengqondo kubazali banamuhla ngenxa yezinga layo eliphezulu nokuphepha.
Ngaphandle kwalokho, u-Hinata unikeza amamodeli ahlukahlukene nezici ezihlakaniphile ukuze asize ukusekela ukunakekelwa kwezingane okungcono kakhulu okungenzeka eminyakeni yokuqala yokuphila. I-Hinata okwamanje yigama elithandwa abazali abaningi eJapane nakwamanye amazwe amaningi, kuhlanganise neVietnam.
I-Huggies – ibhrendi ehlonishwa kakhulu e-US
I-Huggies wuhlobo oludumile lwaseMelika lwamanabukeni ngaphansi kwenkampani iKimberly – Clark. Kusukela evele emakethe yaseVietnam kuze kube manje, u-Huggies ubelokhu ewina ukwethenjwa nothando lomama abaningi baseVietnam ngenxa yokuphepha kwayo kanye nokusebenziseka kalula ngentengo efanelekile.
Imikhiqizo ye-Huggies nayo ithuthukisiwe futhi yakhiqizwa ngokucophelela okukhulu ukuze ilethe ikhwalithi ephezulu yanamuhla. Ngakho-ke, hhayi kuphela umugqa we-diaper odumile kodwa ezinye izinhlobo eziningi ezivela enkampanini zithole ukwazisa okuphezulu kubasebenzisi baseVietnam ekunakekeleni impilo yezingane.
Izihlalo zezingane ezi-5 ezihamba phambili neziphephe kunazo zonke
Uma ungazi ukuthi ungakhetha kanjani umugqa baby exercise chair Iyiphi ehamba phambili futhi ephephile, omama akufanele banganaki amanye amagama alandelayo.
1. Usihlalo wengane kaRichell – RC98010
I-Richell RC98010 iwumugqa womkhiqizo osezingeni eliphezulu ovela e-Japan, ofanele izingane ezisukela ezinyangeni eziyi-7 kuye kwezingu-2 ubudala, zilula kakhulu. Umntwana angahlala, adle noma asebenzise ngenkathi egeza. Isihlalo senziwe ngezinto zenjoloba ezithambile, eziphephile ezingangeni manzi futhi kulula ukuzihlanza. Isihlalo sesihlalo sosana sika-Richell RC98010 sijike kancane sinezimbobo eziningi zokungenisa umoya ukudala ukunethezeka ngokuhlala okujwayelekile, okuzinzile.
I-fixed pad ifakwe ngaphambili ukuze abazali banyathele ukuze isihlalo sihlale sizinzile futhi kulula ukuthwala ingane. Isivalo esiphakathi sisebenza njengepompo esebenza kahle, udinga nje ukuvula ikhava yevalvu bese udonsa unyawo lwakho phezulu naphansi imizuzu emi-2 ukuze ube nesihlalo esithambile, esinethezekile. Kodwa-ke, uma usebenzisa izingane, kufanele ube nomuntu ohlala eduze kwakho, ungasebenzisi isihlalo esifana ne-float ku-swimming pool.
Intengo yesithenjwa: 634,800 VND.
2. Isihlalo sokuzivocavoca ingane Ehlobo
Lona umugqa womkhiqizo ovela e-US onemiklamo eyingqayizivele nemibala egqamile. Ihlobo lifakwe ibha yamathoyizi eseceleni ukuletha injabulo njalo lapho izingane zidla futhi zidlala esihlalweni.
Ihlobo lifaneleka ukusebenzisa ukwesekwa kwezingane ezingcono kakhulu ezigabeni zokuqala zokuphila, ngakho-ke isihlalo siya ngokuwina izinhliziyo zomama lapho sikhetha isihlalo somntwana. Umkhiqizo wenziwe ngezinto zepulasitiki ezisezingeni eliphezulu, ezingenazo izinto eziyingozi, ngaleyo ndlela ziqinisekisa impilo yezingane.
Isihlalo sinesihlalo esivulekile esinomhlane onjengezingalo zikamama ezigona umntwana, sihambisana nebhande eliqinile lokuphepha, eligwema ukuthinta isimiso samathambo esingavuthiwe. Isigxobo esimile siklanyelwe ukuba sibe sikhulu futhi sijiye ukuze ingane ihlale iqinile, idlale ngokunethezeka ngaphandle kokukhathazeka ngokuwa.
Intengo yesithenjwa: 1,749,000 VND.
3. Huggies baby chair
Isihlalo sezingane sikaHuggies siwumkhiqizo wekhwalithi ngentengo ethengekayo ethandwa kakhulu namuhla. Umkhiqizo ulungele izingane ezisukela ezinyangeni ezi-4 kuye kwezingu-3 ubudala. Impahla kakotini yekhwalithi ephezulu imbozwe ngendwangu eqinile, ethambile ngaphandle ukuze isize isihlalo sika-Huggies sakhe ukunethezeka, umuzwa obushelelezi ngaphandle kokubangela ukungezwani komzimba nezinto ezithile.
I-Huggies inomklamo ofanayo nosofa onezinjongo eziningi. Isihlalo sishoniswe phansi ukuze ingane ihlale kahle. Ngokuhambisana nalokho, isihlalo sigoqwe ukuze sisize ngokugcwele umzimba ongavuthiwe wezingane ezincane. Ikakhulukazi, umklamo walesi sihlalo somntwana uklanywe kahle futhi udonsa amehlo ngemibala egqamile ukuze udale ubumnandi nobumnandi uma usebenzisa. Nokho, i-Huggies inesimo esibi sokuthi kunzima ukuyihlanza futhi ithatha isikhala esiningi esikhaleni.
4. Bonbebe baby chair
Isihlalo sezingane sikaBonbebe sithathwa njengomkhiqizo omuhle kakhulu ovela e-Korea lapho siphelezela ingane yakho iminyaka engu-5 yokuqala yokuphila. Imikhiqizo ye-Bonbebe iye yahlangabezana nezindinganiso zokulwa namagciwane eziqashelwa yi-FDA futhi iletha ukuthula kwengqondo kubazali abaningi namuhla.
I-Bonbebe inomklamo oqinile futhi oqinile, ngakho ifanele ukusetshenziswa njengesihlalo sokuqeqesha izingane kusukela ezinyangeni ezi-5. Isihlalo senziwe ngezinto ezithambile, ezinwebekayo ze-PP zokuqina okuphezulu nokumelana. Amanzi nomthelela kusiza izingane ngempumelelo. ukuzabalaza ngokukhululeka.
Ikakhulukazi, isihlalo futhi ifakwe umcamelo concave for headrest yengane kanye nomklamo smart ukusekela ingane endaweni ejwayelekile kakhulu. Ngaphezu kwalokho, i-Bonbebe ingakwazi ukuzungezisa ngezindlela eziningi ezahlukene, ngakho ilungele kakhulu umama nengane.
Intengo yesithenjwa: 1,809,500 VND.
5. Intex baby chair
I-Intex baby chair ingenye yemikhiqizo yesitulo somoya emise okwesilwane ekhethwa omama abaningi. Isihlalo sivela kumkhiqizo waseVietnam, ngakho omama baqinisekiswa ngokuphelele ngentengo noma ikhwalithi.
Isihlalo senziwe ngerabha yeqophelo eliphezulu, sithambile ngokwedlulele futhi siphephile esikhumbeni somntwana kanye nokuba nemvelo. Ngaphandle kwalokho, le nto ibushelelezi, ihlala isikhathi eside, ilukhuni ukufiphala futhi ayingeni manzi, ngakho-ke kulula ukuhlanza isihlalo. Ikakhulukazi, isihlalo siklanyelwe ukuba sibe ngu-5cm ukusuka phansi futhi singene kancane ukuze sinikeze indawo yokuhlala eqinile yengane.
Ngaphezu kwalokho, umama angasebenzisa isihlalo njalo lapho umntwana ethanda ukugeza. Ukukhiqizwa kwe-Intex okunemibala eminingi edonsa amehlo kanye nezimo ezithandekayo ezifana ne-dalmatian, imvubu eluhlaza okwesibhakabhaka, ibhere eliphuzi … kudala injabulo ezinganeni. Ngaphandle kwalokho, lesi sihlalo somntwana silula ukusisebenzisa, kulula ukusigoqa noma ukuqhubeka nohambo olude. Nokho, omama kufanele bagweme ukungqubuzana nezinto ezicijile ezingabhoboza kalula noma zisichebeze kalula isihlalo.
Intengo yesithenjwa: 250,000 VND.
Ngethemba ukuthi ukwabelana okungenhla kukusizile ukuthi wenze isinqumo sokuthenga baby exercise chair ukulingana okuhle kakhulu. Ngenxa yalokho, lungiselela ithuluzi elingcono kakhulu lokusekela lapho ingane yakho idlula ezigabeni zokuqala zokukhula futhi kamuva nezinyathelo zabantu abadala.
Xem Thêm [Review] Top 10 Trà Bá Tước Earl Grey Giá Tốt Yêu Thích Nhất | Muasalebang
Top 10 Bánh Snack ngon nhất hiện nay (O’Star, Oishi, Lay’s) | Muasalebang
Công nghệ nhận diện mống mắt trên điện thoại là gì? | Muasalebang